Hayso WhatsApp kombuyutarka mahadnaq deg deg ah ee PushBulllet | Androidsis
Alfonso ee Miraha | | Codsiyada Android, Whatsapp
In badan oo idinka mid ah ayaa ogaan doona Pushbullet, mid ka mid ah adeegyada iskudhafka ugu fiican ee udhaxeeya kombuyutarkaaga iyo aaladda Android. Hagaag hada, waad ku mahadsantahay Jawaab Deg Deg ah waad awoodaa ka xakamee WhatsApp kombiyuutar kasta.
Shuruudda kaliya ee lagu isticmaali karo Jawaabta Degdegga ah waa inaad leedahay xididkaaga xididaysan. Haddii aadan wali haysan xididka qalabkaaga oo aad rabto inaad haysato Whatsapp loogu talagalay pc kaliya raac talaabooyinka tilmaamahan waxaadna uheli doontaa xidid marinkaaga si deg deg ah oo fudud.
Jawaab deg deg ah ayaa kuu oggolaaneysa inaad ka isticmaasho WhatsApp kombiyuutar kasta
Thanks to Quick Reply, waad ka jawaabi kartaa fariin kasta oo WhatsApp kuugu soo dirto kumbuyuutarkaaga. Iyadoo la tixgelinayo in barnaamijkan waa 1.47 euro, Waxay ila tahay qiimo qosol leh oo loogu talagalay shaqooyinka ay fuliso.
Haddii aad rabto inaad adeegsato adeeggan caanka ah ee fariimaha deg dega ah ee kombiyuutarkaaga waa inaad marka hore soo dejisaa BusyBox oo ku rakib qalabkaaga Android. Ugu dambeyntiina, waa inaad ku rakibtaa Jawaab Deg-deg ah taleefankaaga casriga ah ama kaniiniga oo aad la waafajiso kombuyuutarkaaga. Waa wax aan macquul aheyn in WhatsApp loo helo PC, miyaadan u maleyneynin?
Anigu shaqsiyan waan tijaabiyey codsigan sifiican buu u shaqeeyaa markaa ha ka waaban iyo Ku rakib Jawaab Deg Deg ah qalabkaaga Android inaad awood u leedahay inaad ku isticmaasho WhatsApp-kaaga kombiyuutar kasta dhib la'aan. Ugu dambeyntiina, waxaan kuu daayay xiriiriyeyaasha si aad u soo dejiso labada codsi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Whatsapp » Jawaab Deg Deg ah oo loogu talagalay PushBullet waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka xakameyso WhatsApp kombiyuutarkaaga
Waan rakibay, waxaan rakibay bussybox, xidid baan ahay oo waan joojiyay ogeysiisyada sida uu codsaday barnaamijka mana ii shaqeynayo D:
Waad salaaman tahay ma u baahan tahay addon-ka riixlaha oo rakibmay sidoo kalena ku rakib qalabka riixitaanka taleefanka? Ma wuxuu ku shaqeeyaa firefox mise wuxuu ku shaqeeyaa kaliya jo jo?
Andres T. dijo
Waan isku dayey waana ku guuleystey inaan ka jawaabo fariin kombuyuutarka ah. Dhibaatadu waxay tahay in markaan sameeyo, taariikhda farriinta WhatsApp ayaa la shiilaa oo i weydiistaa inaan soo celiyo.
Sidan oo kale, ma ahan wax macquul ah in la isticmaalo habkan maaddaama ay aad uga dhib badan tahay soo qaadashada moobaylka mar kasta.
Jawaab ku sii Andrés T.
Si fiican ayey u shaqeyneysay illaa aan u cusbooneysiiyo Lolipop
Jawaab Jose Marquez